Uncoma ukuhloniphana emshadweni
UYVONNE Chaka Chaka nomyeni wakhe uMandlalele Tiny Mhinga ngabanye bosaziwayo bakuleli asebebe ndawonye iminyaka emishadweni wabo asebeveze ukuthi bebengelula
NOKUBONGWA PHENYANE | February 14, 2019
‘ANGINGABAZI ukuthi wuJehova obe nesandla ekuvikeleni umendo wami kwaze kwaba la. Ngo-Okthoba 7 sizobe sihlanganisa iminyaka engu-30 ngigane umyeni wami”.
Bekusho Indlovukazi yakuleli emculweni uYvonne “Chaka Chaka” Machaka.
Benomyeni wakhe uDkt Tiny Mhinga ngabanye bosaziwayo asebeyibambe isikhathi eside emshadweni, yize bematasa ngemisebenzi ehlukene.
Namhlanje njengoba kuwusuku lwezithandani emhlabeni, Isolezwe libone kukuhle sithole ukuthi yini eyenze bayibamba kuze kube manje.
UYvonne uthe ushade noTiny eneminyaka engu-23 ngemuva kwesikhathi eside bengabangani.
“Sishiyana ngeminyaka engu-12. Sazana iminyaka ngaphambi kokuthi sithandane. Akukho okudlula ukuhloniphana, uma ngisekhaya ngiba wumakoti, umama nenkosikazi,” kuchaza uYvonne.
Uthe umyeni wakhe uhlale ekhona futhi bayesekana.
“Izingane sizikhulise sihamba amazwe ahlukene ngenxa yokuthi besimatasa. Besisizana epheka, anakekele izingane uma ngingekho, enze neminye imisebezi yasekhaya, engalindi mina ukuthi ngibuye. Lokho kulakhile uthando lwethu futhi lwaqina ngempela,” kuchaza uYvonne.
Uthe okunye okulwakhile uthando wukuthi noma bexabana umyeni wakhe akaze amphakamisele isandla.
“Mina nginolaka ngiyathetha nje impela uma kukhona engingakuboni kahle ekhaya noma ezinganeni zethu. Kodwa kukhona konke lokho umyeni wami uvele ehlise umoya ngoba uyangazi ukuthi ngiwumuntu onjani. Uma kuwukuthi kukhona umfana wethu osephutheni yimi futhi engiba nolaka kuze kube nguyena ongibizela ekamelweni ayongikhuza. Kwesinye isikhathi ngike ngimcele ukuthi athethise izingane kodwa avele akhulume kahle nazo, okuyinto eyenze umndeni wethu wasondelana futhi kwaba nemfudumalo nothando,” kusho uYvonne.
YIZE ethi unolaka futhi engazwani nento engaqondile kodwa uYvonne Chaka Chaka uthi umyeni wakhe uMandlalele Tiny Mhinga uyakwazi ukumgoba ngendlela efanele kulokho
Uthe uyafisa ukuthi izingane zakhe zifane noyise omkhombise uthando.
“Wangithola ngimuhle ngimncane ngomzimba, kodwa ngisho sengimtholele izingane ezingaka umzimba wami washintsha, akakhombisanga ukungangithandi. Ngifisa wonke umuntu wesilisa amthande umuntu asemkhethile kuze kube ngunaphakade,” kuchaza yena.
Uthe sebenabazukulu ababili, futhi basafuna ukuqhubeka banike ithemba nothando kubantu bakuleli.
Uthe abantu abafana noLetta Mbuli noCaiphus bayisibonelo kwabaningi.